February 28, 2022 admin 2170
यो हो संसारकै लोभलाग्दो युक्रेनी राष्ट्रपतिको परिवार ! जसको ज्यान अहिले जोखिममा छ
February 27, 2022 admin 2490
रुसी सेनाले युक्रेनमा आ’क्रमण गर्दा धेरैको ज्यान गएको छ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की अ’सहाय देखिन्छन् र रुसी सेनासँग ल’डिरहेका छन्।विश्वले नै भनि`रहेको छ सबै|भन्दा पहिलो ख’तरामा राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्की को ज्या€न छ । दोस्रोमा
प्रहरीमा पुग्नुअघि पलले सार्व`जनिक गरे यस्तो भावु`क भिडियो (भिडियोसहित)
February 27, 2022 admin 2421
कर णीको अभियोग लागेका नायक पल शाह पक्रा|उ परेका छन् । आज जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उपस्थित भएपछि प्रह|रीले शाहलाई पक्रा`उ गरेको हो । प्रह`री नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले शाहलाई पक्रा`उ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
पललाई धोका दिएर पैसा मात्रै कमाउन चाहान्थे दुर्गेश ? दुर्गेशको योजनाको अर्को ठूलो खुलासा ?…
February 26, 2022 admin 2850
पछिल्ला दिन`हरुमा नेपाली संगीत क्षेत्रमा स्क्या,न्डल किङको उपमा पाउन थालेका छन् गायक दुर्गेश थापाले । उनीमाथि एक`पछि अर्को वि,वाद आ`इरहँदा अब त यस्तो लाग्छ कि उनी विवा,दमा नै मज्जा लिन थालिसके । ‘हामी पनि नाच्नु
February 26, 2022 admin 2662
February 26, 2022 admin 2306
दुर्गेश थापालाई हटाईएको महोत्सवमा किन जान मानेनन् गायक बद्री पंगेनी ?
February 26, 2022 admin 1934
गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा`लाई हटाइएको ‘सुदूरपश्चिम प्रादेशिक महोत्सव’ मा लोकगायक बद्री पंगेनी पनि सहभागी नहुने भएका छन्। महोत्सवमा सुदूर`पश्चिमको मौलिक लोक संस्कृति र स्थानीय`ले प्राथमिकता पाउनु`पर्छ भन्ने आवाज प्रति ऐक्य`बद्धता एवम् समर्थन जनाउँदै उनले
February 26, 2022 admin 2066
February 26, 2022 admin 1474
February 25, 2022 admin 1540